Ingane encane ibuka ubaba wayo eshokhwa ugesi | Scrolla Izindaba
UXolisani Boma uthembise ukuthi uzothatha indodakazi yakhe eneminyaka emithathu ayosebenza nayo – kodwa lokho akwenzekanga.
Esikhundleni salokho le ntombazanyana ibone ubaba wayo oneminyaka engama-26 ewa eshona phambi komjondolo wakhe e-Govan Mbeki Village e-Port Elizabeth ngenkathi eshokhwa ugesi wezintambo zezinyokanyoka.
Intombi kaXolisani, uZanele Charles, utshele abakwa-Scrolla.Africa ukuthi uXolisani ubengasebenzi ngalolo suku – futhi ubehlele ukuthatha indodakazi yabo ayoyibonisa lapho asebenza khona e-Wors King Butchery.
“Kodwa uthathe isinqumo sokulungisa isigxobo ebesiwele ocingweni lwakhe ngokushesha,” kusho uZanele.
“Umfowabo omncane ubemsiza. Ubegqoke izikhindi, amagilavu ​​kanye nama-slop kanti ubesebenzisa insimbi ukumba umgodi.
Uthe ngemuva kwemizuzwana kungene indodakazi yakhe endlini ikhala.
“Ungitshele ukuthi ubaba wakhe uwele phansi. Ngiphuthume ngaphandle ngamthola ebheke phansi. Sizamile ukumdonsa ezintanjeni kodwa ubesashokhwe ugesi,” uyasho.
“Umfowabo ubemshaya emilenzeni ngepulangu futhi sikwazile ukumkhipha kodwa izandla beziqinile. Ngacela abangani bakhe ukuthi basisize bamphuthumise esibhedlela ngemoto yabo kodwa washonela endleleni.”
UZanele uthe bese beneminyaka eyisishiyagalombili bendawonye.
“Wayeyindoda enakekelayo futhi enothando. Ngiyakungabaza ukuthi ngizobuyela emjondolo wethu futhi ngoba kuzongikhumbuza lolu suku olubi empilweni yami,” uyasho.
UNomimi Sokani, ongumakhelwane futhi ongumholi womphakathi, uthe: “Ngimuzwe eshaya ngekhanda emjondolo wakhe ngesikhathi ewa phansi. Ngiphumele ngaphandle kodwa asikwazanga ukumsiza,” uyasho.
“Siyahlupheka futhi asikwazi ukuthenga ilitha likapharafini ngo-R16. Iningi lethu liphila ngemali yesibonelelo sikahulumeni. Sekuyiminyaka emine sixhuma ugesi ngokungemthetho kanti imijondolo yethu emine nayo ishiswe yilezi zintambo zezinyokanyoka kusukela ngonyaka odlule. ”
Ukaputeni u-Andre Beetge uthe kuvulwe idokodo.